Ingabe okuqukethwe kwakho kwe-SEO kungaba i-backlink generator?
Isigaba esibucayi kunoma imuphi umkhankaso wokumaketha ku-intanethi uthola izixhumanisi ezifanele futhi zekhwalithi ye-SEO emithonjeni yewebhu ehloniphekile. Kungaba nzima nakakhulu kumawebhusayithi osanda kusungulwa ukuze uthole izixhumanisi ezivela kumasayithi aphezulu we-PR noma ukudala uxhumano nababhlogi abavelele. Nokho, akusona isizathu sokuphelelwa ithemba - que es agujero obturador fotografia. Ngisho nabathengisi abathile abanenkinga abanenkinga ngokuthola ama-backlink amahle. Yingakho i-general backlink generator yakhiwa ukuze kube lula ukwenza inqubo yokuthola izixhumanisi eziphezulu.
Isu le-SEO alinamsebenzi uma okuqukethwe kwakho kungenzi kahle ku-intanethi. Ukuphumelela kweqhinga lakho le-SEO engaphezu kwezingu-80% kuncike kokuqukethwe oshicilelayo ngakho-ke kubalulekile ukuthi uqaphele ngokukhethekile izinga lakho lokuqukethwe nokuhambisana.
Ngakho, uma okuqukethwe kwakho kusebenza njenge-generator backlink, lesi sihloko sizokusiza. Ake sixoxe ngamasu amathekithi wokuthuthukisa okuqukethwe azosiza umkhankaso wokwakha umxhumanisi wakho.
I-SEO backlink amasu generator
Yakha okuqukethwe okupholile, ukunikeza abafundi bakho okuthile okusha
ukunganakwa komsebenzisi kokuqukethwe kwakho kungachazwa ngokuqina hhayi okuhlukile kumatheksthi akho. Uma uqhuba ucwaningo lwe-niche emakethe, cishe ufunde ama-athikili wakho omncintiswano owenza amasheya amaningi nama-athikili. Noma kunjalo, akusiyo njalo umbono omuhle nje ukubhala esihlokweni esifanayo ukuze ube i-backlink generator njengoba amanye amawebhusayithi akwenza okufanayo futhi isihloko esithile sesifinyelele imingcele yaso. Yingakho ngikugqugquzela kakhulu ukuba ungabhali ngezihloko ezifanayo nabathengi bakho abazenzayo. Esikhundleni salokho, vele nemibono emisha futhi emisha engaba ukutholakala okubalulekile kwabafundi bakho. Ngaphezu kwalokho, udinga ukugwema ukuzithuthukisa kokuqukethwe kwakho njengoba kubonakala kungavamile futhi akuphakamisi isithakazelo somsebenzisi kumkhiqizo wakho.
Namuhla, i-Google rankings incike kwikhwalithi ye-backlink kunokuba ibuningi bayo. Yingakho udinga ukubheka amathuba okukwakha isixhumanisi kusuka emithonjeni ephezulu yegunya lewebhu. Ukucwaninga amasayithi wesiphequluli esiyinhloko ongathanda ukuthi okuqukethwe kwakho abe yibhange kusuka kuwe kungakunika imibono emisha emibhalweni efanele.
Vula izilaleli zakho ezihlosiwe
Ukuze usebenzise okuqukethwe kwakho njenge-generator backlink, udinga ukukhalaza kuzilaleli zakho ezihlosiwe. Uma ubhala okuqukethwe kwakho nomsebenzisi engqondweni, uyayinikeza eminye imithombo yewebhu ethinta izithameli ezihlosiwe ezifana nawe.
Ukuqonda ukuthi ngabe okuqukethwe kwakho kuyathinta izethameli zakho noma cha, kudingeka uhlaziye ngokubanzi ukuhlaziywa kokukhangisa nokucwaninga izidingo zakho zamakhasimende.Ungahlola futhi inhloso yomsebenzisi ngokubhala izihloko ngokusekelwe emibandela emisha yokucinga njengoba abafundi bezinsuku bangase bazibuze imibuzo eminye. Qinisekisa ukuthi uphendula imibuzo efanele ehambisana negama ngalinye elingukhiye ukuze uhlale ufanelekile.
Thuthukisa ama-snippets akho
Ukuze uthuthukise isikhundla sakho sewebhusayithi, ungenza ama-SERP akho amathekisthi afaneleke futhi azikhulume. Isingeniso se-SERP esethulayo singandisa inani lokuchofoza bese ususa ikhasi lakho phezulu ekhasini lomphumela wosesho. Amazwibela ngisho noma ahlelwe kahle awakuthinti ngokuqondile isikhundla sewebhusayithi yakho ku-SERP, azosebenza njengokubheka okuwusizo kokuqukethwe kwakho kokubili ukusesha kubasebenzisi kanye nabasebenzisi.